“Gujii Fi Booranatti Hidhattoonni ‘WBO’ Namoota Jaha Ajjeesan” Jiraattota
Aanaa Dhaas, Godina Booranaa
Sanbata darbe kana Godina Gujii Bahaa Aanaa Gumii ELdalloo keessatti hidhattoonni maqaa Waraana Bilisummaa Oromoon socho’uu jedhaman namoota lama, Godina Booranaa Aanaa Dhaas keessatti ammoo namoota afur ajjeesuu isaanii jiraattonni Sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Haala ajjeechaa Gujii Bahaa Gumii Eldallootti raawwate jiraataan VOA’f himan tokko warri hidhate kun abbaa qabeenyaa akkasumas jiraataa aanichaa ka tahan obbo Duuba Liiban ukkaamsanii yoo deeman itti aanaan bulchaa ganda sanii harkaa buusuuf yoo birmatu lamaan isaanii ajjeesanii deemanii jedhu. Ilmi Obbo Duuba Liiban haala ajjeechaa abbaa isaarra dhaqqabe yoo himu, ‘Abbaa koo obbo Duuba liiban isaa baadiyyaa qonnaaf dhaqu warri hidhate kun dhufee manaa fuudhee alatti ajjeese’ jedha.
Obbo Duubi nama ganna 50 fi abbaa ijoollee sagaliiti yoo ta’an, Gumii ELdalloo magaala bulbul naannoo ganda Alduuba Areeroo jedhamu keessatti sanbata ganama sa’aatii 4 irratti hidhattootaan ajjeefaman jedhu maatiin isaanii.
Humni naga kabachiistota mootummaas warra yakka kana raawwate to’achuuf sakatta’a taasisaa jiraatus, warri hidhatee socho’u kun garuu sakatta’a fi to’annaa isaanii ol jiruu jedhu jiraattonni yoo dubbatan.
Waa’ee waan Gumii Eldallootti raawwate Hoogganaan Waajjira Bulchiinsaa fi Nageenyaa Aanaa Gumii Eldalloo Obbo Abdii Kulee; ajjeechaan kun raawwachuu amananii jiru. Aanichis naannoo shan waliin rakkoo daangaa waan qabuuf nageenya buusuun nuuf rakkisaa ta’eerallee jechaan dabalanii dubbatan Ajjeechaan lammaffoo hidhattoota maqaa WBO’n socho’aniin raawwatame jedhame ka Godina Booranaa Aanaa Dhaas keessatti ammas sanbata darbe ta’edha. Akka jiraattonni Godina Booranaa Aanaa Dhaas jedhanutti hidhattoonni maqaa WBO’n naannicha keessa socho’an sanbata guyyaa namoota 4 ajjeesaniiru. Liiban Jaarsoo jiraataan Godina Booranaa ilma abbeeraa isaa dabalatee namni afur warra hidhatee socho’u Kanaan ajjeefamuu VOA’tti hime.
Akka Liiban jedhetti ka’umsi ajjeechaa kanaa hidhattoonni kun re’ee jiraattotaa ooffatanii deemuu isaaniiti. Yoo jiraattonni re’een isaanii duraa hidhattootaan irraa ooffatamuu warra nageenyaaf himan warri milishaa warra re’ee saame kana to’annaa jela oolchuuf adoo deemanii walitti dhukaasuun uumame jedhe.
Ajjeechaa humna naga kabachiistota mootummaarratti dhaqqabe jedhame kana Obbo Rashiid Gufuu bulchaa Aanaa Dhaas mirkaneessanii jiru.
Obbo Waaqumsaa Guutuu Itti Aanaa Hooganaa hidhattoota WBO ta’uu dubbatan. Obbo Waaqumsaan waraanni keenya kan lolu warra raayya ittisa biyyati jedhu. Kanaafis ajjeechaan Gumii Eldalloo qaama raayya ittisa biyyaarratti male jiraattota irratti miti jedhan.
Waa’ee ajjeechaa Aanotii lameen keessatti raawwate jiraattonni warri yakka kana raawwate to’annaa jela hin oolle jechuun dubbatu. Angawootni aanaalee VOA’f dubbatanis nageenya kabachiisaa jirra deebii jedhu male nama yakka kanaan walqabatee to’annoo jela oolchine jedhan hin ifoomsine.
Haala nageenyaa kibba Oromiyaa Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenyaa Oromiyaa gaafatameeti jira. Itti Aanaan Hoogganaa Biirochaa Koloneel Abbebee Garasuu rakkoon nageenyaa Godinaalee Gujii, Booranaa, fi lixa Oromiyaatti mullataa akka jiru himanii ajjeechaa sanbata kibba Oromiyaatti ta’e jedhame garuu quba hin qabu jedhan.
Garuu hidhattoota maqaa WBO’n socho’an qabsoo karaa nagaatti yaa deebi’aniif Biiroon Bulchiinsa fi Nageenya Oromiyaa, mootummaanis sochiisaatti jira jechuun deebii kennan.
Obbo Abbebeen dabalanii mootummaan nageenya amansiisaa akka jiraatu gochuuf hojjetaa jira jedhan.